Iko Kukosha Kwezviri Kushambadzira | Martech Zone
China, July 7, 2011 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Uku kutaridzika kwakasarudzika kushambadzira zvemukati. Isu takagovana iyo Zvemukati Grid nezuro, tichikurukura mashandisiro emhando yega yega yezvinyorwa zvine hungwaru. Iyi infographic inodaidzira yakatonyanya kusimba zano nekuti hunhu hwevaverengi huri kuchinja… kuwedzera kusava nechokwadi uye kuchengetedza mari.
Per the Alinean Infographic: Kuwana kudzoka pane zvemukati zvekushambadzira investa zvinoda zvakakosha, zvinokanganisa, uye kukoshesa zvakanangwa maturusi uye maturusi kuitira kuti ubudirire Kurwisa Frugalnomics ™ - kubatanidza, kuita uye kutengesa kune iyi nyowani rudzi rwevatengi.
Tags: alignzvemukati zvekushambadzira bhajeticontent strategiesyakatarwa zvemukatizvinodenhadzoka pane zvemari kudyaraukoshi